Musharax Maxamed Cilmi “Waxaan xoogga saarayaa ka shaqeynta dib u heshiisiinta bulshada Gobollada dhexe” – Radio Muqdisho
Musharax Maxamed Cilmi “Waxaan xoogga saarayaa ka shaqeynta dib u heshiisiinta bulshada Gobollada dhexe”
Maxamed Cilmi Afrax “Mideeye” oo ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimadda goboladda dhexe ee dalka gaar ahaan Gobollada Mudug iyo Galgaduud oo si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Xeraale ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in uu ka shaqeyn doono dib u heshiisiinta.
Qeybaha kala duwan ee bulshada oo sitay boorar ay ku taageerayaan musharaxa ayaa meel magaalada Xeraale u jirta 2KM, ku soo dhaweeyay, waxaana wafdiga Maxamed Cilmi Afrax soo dhaweynta kaddib la geeyay xarunta maamulka Xeraale.
Kulan lagu qabtay xarunta maamulka ayaa waxaa ka qeyb galay qeybaha bulshada ee halkaasi ku nool, waxaana dadkii goobta hadal ka jeediyay ay tilmaameen in Maxamed Cilmi Afrax Mideeye ay si wanaagsan u yaqaaniin, maadaama isaga oo Hay’adda ICRC Madax ka ah uu wax badan u qabtay bulshada ku nool gobolka Galgaduud, iminka ay soo dhaweynayaan in uu isu soo taago qabashada xilka Madaxtinimo ee maamulka Gobollada Dhexe.
Guddoomiye ku-xigeenka deegaanka Xeraale Mustaf Sheekh oo isna kulanka hadal ka jeediyay ayaa sheegay in Maamulka iyo shacabka reer Xeraale ay taageersanyihiin musharax Maxamed Cilmi Afrax “Mideeye”, isagoo ku tilmaamay in uu yahay shaqsi wax badan u soo qabtay bulshada Gobollada dhexe.
Ugu dambeyntii Musharax Maxamed Cilmi Afrax “Mideeye” oo xafladda lagu soo dhaweynayay hadal kooban ka jeediyay ayaa ugu mahadceliyay maamulka iyo shacabka ku nool deegaanka Xeraale, sida diiran ay u soo dhaweeyeen, waxaana uu u balan qaaday in haddii uu ku guuleysto xilka uu u taaganyahay in uu si cadaalad ah ugu adeegi doono bulshada Gobollada dhexe, isla markaana uu ka shaqeyn doono sidii uu dib u heshiisiin dhab ah u dhex dhigi shacabka Gobollada Mudug iyo Galgaduud.
Maxamed Cilmi Afrax Mideeye oo horey madax uga soo noqday Hay’adda ICRC ayaa ku guuleystay in uu ceelal iyo mashaariic kale ka hirgeliyo deegaannada Gobolada Mudug iyo Galgaduud, isla markaana uu iminka diyaar u yahay in uu wax badan u qabto bulshada halkaasi ku nool.
Dhageyso Warka Subaxnimo 20.01.2014
DAAWO-Madaxweynaha Soomaaliya oo saxiixay heshiiska caalamiga ah ee dhowrista xaquuqda carruurta